Dani Alves oo weerar ku qaaday garsoorka Spain kaddib guushii ay Real Madrid ka gaartay Athletic Bilbao – Gool FM
(Spain) 06 Luulyo 2020. Daafacii hore ee kooxda Barcelona ee Dani Alves ayaa qeyb ka soo noqday dadka dhaleeceeya garsoorka Spain, kaddib guushii ay Real Madrid shalay ka gaartay naadiga Athletic Bilbao.
Real Madrid ayaa saddexda dhibcood kaga soo qaadatay Athletic Bilbao garoonka San Mames oo ay ku booqatay, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Haddaba guushan ay gaartay Real Madrid ayaa waxay kaga dhigan tahay inay taalbo horey ugu qaaday ku guuleysiga horyaalka La Liga ee dalka Spain xilli ciyaareedkan, maadaama ay 4 dhibcood nadiif ah ka sareyso Barcelona, waxayna u baahan tahay inay ka hesho kaliya 8 dhibcood ka mid ah 12 dhibcood oo ay heli karto.
Si kastaba ha noqotee daafaca reer Brazil oo guulo waa weyn la soo gaaray kooxda Barcelona 10-kii sano ee la soo dhaafay, ayaa wuxuu sharaxay in habka kaliya ee lagu garaaci karo Real Madrid ay tahay in la sameeyo dadaal dheeri ah sidii caadiga aheyd, sababa la xiriira in garsoorka uu xilli kasta garab taagan yahay, sida uu hadalka u dhigay.
Dani Alves ayaa faalo ka bixiyay sawir uu soo dhigay boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka kaasoo ay ku mideysan yihiin Sergio Ramos iyo Raul Garcia, wuxuuna yiri:
“Maalin maalmaha ka mid ah waxay na bareysaa inaan qabano wax ka badan sidii caadiga ahaa, ama ma noqon doonto mid nagu filan, waana sida ay noqotay”.